Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Cesc Fabregas Nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Midfield Mastero onye kacha mara aha na aha njirimara 'Cescy'. Anyị Cesc Fabregas Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị nkọwa zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Ex-Arsenal na Chelsea Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, Ndụ Ezinụlọ na ọtụtụ nkwụsị na ON-mara obere ihe ọmụma banyere ya. Ka anyị bido;
Akụkọ Cesc Fabregas nke Nwatakịrị - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Francesc “Cesc” Fàbregas Soler mụrụ na Mee 4, 1987, n’obodo Spen dị n’ọdụ ụgbọ mmiri nke Arenys de Mar. O si n’ezigbo ụlọ.
Nne ya, Nuria, rụrụ ọrụ dị ka onye na-azụ anụ nwa oge tupu ya emechaa nwee ụlọ ọrụ pastry ya. Nna ya, Francesc Fàbregas Sr., nyere ezinụlọ ya nri site na ịrụ ọrụ nke mbụ dị ka onye na-ewu ụlọ tupu ha enwee ụlọ ọrụ ihe onwunwe.
Cesc Fabregas sitere na agbụrụ ọcha nke Catalona nwere akara zodiac Taurus. Cesc Fabregas n'oge ọ bụ nwata bi na agbata obi ebe ịchụ ehi na ịchụ nta ero bụ usoro nke ụbọchị ahụ.
Ọ dịrị ndụ afọ iri na ụma n'ihi nne na nna ya ịgba alụkwaghịm. Nke a egbochighị ya ịghọ kpakpando klas nke ụwa.
Cesc Fabregas Ndụ Ezinụlọ:
Cesc Fabregas na Nna (Francesc Fàbregas Sr.)
Nna ya, Francesc Fàbregas Sr. abụghị ụdị ọgaranya. Ọ malitere ndụ dị ka onye ọrụ na-enweghị ọrụ na-arụ ọrụ nke nyere aka na-ewu ụlọ nke Catalonia nke oge a maara dị ka Barcelona.
Ọ bụ onye mbụ na-agbaji igbe ọrụ na-ewu ihe nke ọ na-eji ego enwetara na-elekọta ezinụlọ yana iziga obere Fabregas n'ụlọ akwụkwọ mmuta ya. N'ajụjụ ọnụ a na-adịbeghị anya, Francesc Fàbregas Sr. kwuru ọtụtụ ihe banyere mmalite mmalite ndụ ya.
N'okwu ya….'Dịka onye ọrụ na-enweghị ọrụ, amalitere m ndụ na ọrụ niile ọbụlagodi na ha na ọnọdụ ọrụ pụrụ iche sitere na mbido na ibudata na ebe dị mfe, ma ọ bụ ikpughe ihe egwu.
Dị ka onye ọrụ owuwu, ejikere m maka ihe ọ bụla! Ya mere, ogologo oge m nwere ike ịkwụ ụgwọ nwa m nwoke n'ụlọ akwụkwọ football ya ma nye ezinụlọ m nri. Ekwenyesiri m ike na nwa m anwụghị dị ka m '.
Francesc Fàbregas Sr nwere ugbu a ma jikwaa ụlọ ọrụ ihe onwunwe ya, niile na-ekele nwa ya nwoke bụ Cesc Fabregas maka ego enyere maka mmalite.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'uche na Soccer bụkwa akụkụ buru ibu nke ndụ Francesc Fàbregas Sr.
Ọ na-egwu bọl mgbe ọ mụsịrị nwa ya nwoke, na mgbe oge ruru nwa Fàbregas na-eto eto, ọ bụ nna ya rụrụ ọrụ dị ka onye nchịkwa mbụ ya.
Cesc Fabregas na mama m (Nuria Soler).
Mgbe nna ya chere ihu na ọrụ ya na-ewu ụlọ, nne ya, Nuria Soler, rụrụ ọrụ dị ka onye nchịkwa maka egwuregwu FC FC ruo ogologo oge.
Ọ nọ n'etiti ndị kacha mma na Camp Nou bụ ndị na-ahazi nnyefe, nkwadebe na inye nri maka ndị egwuregwu bọọlụ.
Ọ bụ nwa ya nwoke bụ Cesc, onye na-egbo mkpa ezinụlọ ya mezuru nrọ ya nke ịhapụ usoro nri iji nweta ụlọ ọrụ achịcha ya.
Taa, ụlọ ọrụ pastry ya dị na Barcelona na-arụpụta ụdị ngwaahịa niile eji esi nri dịka ntụ, shuga, mmiri ara ehi, bọta, mkpụmkpụ, ntụ ntụ, na akwa.
Nuria Soler hụrụ nwa ya n'anya. Ha abụọ ka bụ ndị na-enweghị ike ịkọwa. N'ajụjụ ọnụ a na-adịbeghị anya, ọ kwuola otu oge ..
'Ikekwe, akara aka na akara aka gaara enye Cesc nne na nna ka m na papa ya. Ma ọ dịghị ihe, nwere ike inye anyị nwa ka mma karịa ya.
Anyị hụrụ nwa anyị n'anya, ọ bụ ihe kachasị mma na ndụ anyị. Ms Soler kewapụrụ onwe ya na di ya ma ya na onye ọhụụ bi.
Cesc Fabregas nwere nwanne nwanyị ntà nke aha ya bụ Carlota Fabregas. Ha bụ ezigbo ndị enyi.
Cesc Fabregas na Nwanne nwanyị (Carlota Fabregas).
Ya na nne ya biri, Nuria Soler na ha abụọ na-elekọta ụlọ ọrụ pastry mgbe ha gbara alụkwaghịm na Francesc Fàbregas Sr.
Cesc Fabregas Biography - Okwu maka Kachasị mma N'ịgba bọọlụ n'ụwa:
Nke mbu, o kwesiri ikwuputa na Cesc mara ezigbo nma ma nwee agwa mara nma.
Gị, dị ka nwatakịrị ọ dọtara ụmụ agbọghọ niile. Mgbe ahụ ọ bụ akpịrịkpa na ntaramahụhụ ya enyeghị ya ọmarịcha mma zuru oke. Ọ ghọrọ nwoke nrọ nke ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-eto eto na iri afọ abụọ.
Taa, a na-elezi anya ya dịka ihe oyiyi Michelangelo a na-atụ anya ya. Ihu ya dị mma. Egbugbere ọnụ ya mara mma: ụdị nke na-ejedebe na obere obere smirk na nkuku. Ụzarị nke anyanwụ na-eme ka ihe dị iche iche dị n'egedege ihu na agba ya.
Onye na - agba ọsọ maka egwuregwu kacha mma n'ụwa.
Egbugbere ọnụ ya dị ka mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, cologne ya siri ike dị ka etiti abalị. Anya ya na-enwu gbaa.
Okpokolo agba ya siri ike ma dabara adaba dị ka mkpịsị ụkwụ nke ọsụsọ na-agbadata nkwụsị ya. Ntutu isi ya dị ka ebili mmiri miri emi ụmụ agbọghọ ọ bụla agaghị eche ịnya.
Ka a sịkwa ihe mere ọtụtụ ụmụ nwanyị ga-eji kwuo na aka ya ga-adị nro ma dịkwa nwayọ, sie ike ma na-adọrọ adọrọ.
Afọ Iri na Lovema Lovehụnanya Ndụ:
Cesc Fabregas na enyi ya nwanyị mbụ Carla Garcia hụrụ ịhụnanya dị ka ndị nọ n'afọ iri na ụma laghachi na Spanish ha. Ha ghọrọ di na nwunye mgbe Arsenal si na Barcelona nye aka na Cesc na 16.
Nwanyị Cesc Fabregas (Carla Garcia).
Ha anọkọla kemgbe afọ asaa, ọtụtụ na-atụkwa anya na ha ga-enwe agbamakwụkwọ di na nwunye. Otú ọ dị, football kpakpando kwuru na ya na Garcia na April 29, 2011.
Cesc Fabregas na Carla Garcia (firsthụnanya mbụ ya).
Dị ka akụkọ si kwuo, di na nwunye ahụ kewara ekewa n'ihi ya Cesc kpebiri ịhapụ ya. Agbanyeghị, amabeghị ma ọdịdị Semaan na ndụ Fabregas bụ ihe kpatara njedebe nke mmekọrịta ya na mbụ.
Papa Fabregas kwetara na mkpebi ahụ "karịa nke Carla". O kwukwara na “” Ọ bụ ihe ihere. Ha ebikọwo ọnụ kemgbe ogologo oge ma ọ bụ nwanyị mara mma. ”
Cesc Fabregas 'bụ enyi nwanyị bụ Daniella Semaan a maara dị ka nwunye mbụ nke otu nde mmadụ, onye a maara maka ọmarịcha ụlọ ya, okomoko na ọgaranya na Kensington na Chelsea.
N'oge alụmdi na nwunye ha, di na nwunye ahụ nwere ụmụ abụọ, otu nwa nwanyị dị afọ 11 na nwa nwoke dị afọ itoolu.
Ezigbo ndị enyi Cesc kpughere na Cesc Fabregas dị ka ọ dị nso nso nso a nwee obi ụtọ ma nwee ahụ iru ala karị. Onye ọkpụkpọ bọọlụ ahụ nwere egbugbu ọhụrụ nke gosipụtara kpakpando nke nwere mkpụrụedemede "D" n'ime aka ekpe ya.
Ejiri ọtụtụ okwu Arabic, mee ka ekpughere na ihe ọ pụtara bụ My Life D Forever.
Cesc Fabregas na Daniela Semann Storyhụnanya Akụkọ:
N'ime ụmụ nwanyị niile na-alụghị di na nwunye nwere mmasị na ụwa, obi Cesc Fabrega dara naanị otu nwanyị nke mere ihe niile iji kwụsị alụmdi na nwunye ya n'ihi ịhụnanya.
Ọ bụghị onye ọzọ karịa ndị Lebanọn mụrụ 'Daniella Semaan '.
Otu Daniella Semaan si banye na Ndụ Cesc Fabregas.
A na-akpọkarị ya nwanyị nke dọkpụrụ kpakpando mbụ nke Arsenal, Fabregas, n'etiti etiti ịgba alụkwaghịm ọtụtụ nde. Ọ gbara di mbụ ya gbara alụkwaghịm bụ onye nwere akụ na ụba akụ na ụba iji dozie nwoke mbụ na Arsenal.
Elie Taktouk na-enwe nkụda mmụọ na Fabregas na Ex-Nwunye.
Dabere na Billionaire Ngwongwo 'Elie Taktouk ',
"O juru m anya na iwu UK dị ka ụlọikpe ga-ezuru ụlọ nwoke ma nye ya nwanyị na-akwa iko iji soro enyi ya nwoke na-emejọ ya"? Na-ekwu Elie Taktouk.
Dabere na onye ị kwenyere, e nwere nsụgharị abụọ nke otú ndị na-agba ọsọ Arsenal ahụ bụ Cesc Fabregas si zute nwa agbọghọ mara mma Daniella Semaan.
Ihe ndekọ ya banyere ihe ndị mere na ha gbanwere nọmba mgbe ụjọ ji ụjọ bịakwute ya na ụlọ oriri na ọ Japaneseụ Japaneseụ ndị Japan na London iji rịọ maka ndekọ aha ya maka nwa ya nwoke na-agba bọlbụ onye ọ nwere maka di ya.
Mgbe ha nwetasịrị akụkọ ahụ, akụkọ gosiri na ọmarịcha nwanyị Miss Semaan na-agbagharị na-akpali agụụ mmekọahụ gafee ụlọ nri ahụ ka o jiri obi ike tụda mpempe akwụkwọ, nke edere nọmba ekwentị ya na tebụl onye ọkpụkpọ ahụ.
Onye mbụ na-abanye na 38 dị afọ Mr Taktouk nwere ihe a na-eme mgbe ọ meghere akwụkwọ akụkọ ụtụtụ ya na June 2011 iji hụ nwunye ya, nke bụkwa 38, na-ekerịta anyanwụ na obodo Spanish na ezumike. Nice na ndịda France.
Ma enwere obere ihe ga - eme ka mmadụ kwụsị nri ụtụtụ ya karịa ịchọpụta bikini-yi uwe 'ihe omimi brunette' nke agbadoro egwuregwu bọọlụ ama ama n'ụwa niile na-abụ nwunye nke ya.
Mazị Taktouk ewereghị ịbụ onye a kpụkọrọ - yabụ n'ihu ọha - dinara ala. Izu a, ọ dọkpụụrụ Fabregas dị afọ 25 na ọgụ na-aga n'ihu (ma dị oke njọ) na nwunye ya na nwunye ya maka ego nke alụmdi na nwunye ha 13 afọ.
N'otu Ụlọikpe Mkpegharị Ikpe na London, ọ na-ebo Miss Miss Semaan ebubo ịgha ụgha na onye ikpe na ikpe ịgba alụkwaghịm ha na ọnwa gara aga site n'ikwu na ndị ịgba egwu adịghị enye ego ndụ ya.
Mazị Taktouk, onye sitere na Lebanọn, chọrọ ịgbanwe iwu na-ekwu na ọ ga-eresị flat 7 nde ụlọ di na nwunye ahụ kesara na Belgravia iji nye onye nke mbụ otu nde £ 1.4 iji zụta ụlọ ọhụrụ n'isi obodo ahụ .
Ọ na-ewe oké iwe na n'ime izu atọ ịtinye ụlọ ọkwa II nke edepụtara na ahịa, ọ natara ego £ 5.4 maka ya site na azụmaahịa dabere na Barcelona - ọ gafere na ụlọ ọrụ ahụ bụ nke Fabregas.
Ndị ezinụlọ Cesc Fabregas:
Fabregas nwere nwa nwanyị dị afọ abụọ bụ Lia, ya na onye ibe ya ọ hụrụ n'anya bụ Semaan. N'okpuru ebe a bụ foto mara mma nke ezinụlọ mara mma.
Ezigbo Ezinụlọ nke Cesc Fabregas.
Cec na Ezinụlọ na nso nso foto foto.
Cesc Fabregas na Enyi Enyi nọ na-apụ apụ.
Cesc Fabregas na Ezinụlọ na foto foto dị n'èzí.
Na-eme ememe nke egwuregwu Premiya na Enyi Enyi.
Cesc Fabregas na Ezinụlọ na-eme ememme Premier League nke Chelsea.
Na-agba akaebe banyere ọmụmụ nwa ya nke abụọ 'Capri Fàbregas'
Na-apụ n'ọhịa, ihe nọgidere na-aga nke ọma dị ka Fabregas, mgbe ọ mụsịrị nwa ya nke abụọ na 2015.
Ọ nweghị ike ịnwe ọ hisụ ya mgbe ọ ghọrọ nna ọzọ, na-ezigara onwe ya na Facebook site na ime ụlọ ya na enyi ya nwanyị bụ Daniella Semaan na nwa amụrụ ọhụrụ.
Cesc Fabregas na-agba akaebe banyere ọmụmụ nwa ya nwanyị.
Fabregas enweela nwa nwanyị dị afọ abụọ, Lia, onye ya na onye ibe ya nọ na Semaan.
N'ebe ọrụ gọọmentị Facebook ya, onye Midfielder kwupụtara ozi ahụ na-asị: 'Nna ọzọ. Enweghị m ike ịdị mpako, na-ekele gị @ daniellasemaan7 maka iweta mmụọ ozi ọzọ n'ime ezinụlọ ma nwee obi ike '#CapriFabregasSemaan.
Cesc Fabregas Biography - Ngwaahịa nke Brolọ Na-agbaji:
Mmebi nke Cesc Fabregas mere ka o sie ike mgbe ọ dị obere nke afọ 10. Ma ihe mgbu ahụ belata oge ụfọdụ site na enyemaka nke Pep Guardiola onye bụbu onyeisi ndị isi nke ọgbakọ Catalan (FC Barcelona).
Ọ bụ onye na-eto eto Cesc bụ onye a na-asọpụrụ ka ọ na-etolite. Pep Guardiola kasiri ya obi. Ọ bịanyela aka na uwe maka Fabregas na ya bụ ozi: "Otu ụbọchị, ị ga-abụ ọnụ ọgụgụ Barca anọ". Nrọ a bịara bụrụ eziokwu.
Cesc Fabregas Bio - Ọrụ Nlekọta Oge Ochie:
Fàbregas akwadola FC Barcelona kemgbe ọ bụ nwata wee gaa egwuregwu mbụ ya mgbe ọ dị ọnwa itoolu na nna nna ya.
Ọ malitere ọrụ ịgba bọlbụ ya na CE Mataró, tupu e debanye aha ya na ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke La Masia nke dị na 10 na 1997.
Cesc Fabregas Ọrụ Nlekọta Oge Ochie.
A kọrọ na onye nkụzi mbụ ya, Señor Blai, ahọrọghị Fàbregas maka egwuregwu megide Barcelona na mbọ iji zoo ya n'aka ndị na-egwu ha.
Otú ọ dị, ụzọ a enweghị ike iguzogide Barcelona ruo ogologo oge, Mataró mekwara ma kwe Fàbregas ka ya na Barcelona zụọ otu ụbọchị n'izu.
N'ikpeazụ, Fàbregas sonyeere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Barcelona oge niile. Ọzụzụ mbụ ya bụ dị ka onye na-eche nche na-egwu egwu na-egwu n'akụkụ aha ndị a ma ama dịka Gerard Piqué na Lionel Messi.
Ọ bụ ezie na ọ bụ onye na-eme nke ọma, mgbe ụfọdụ ọ na-atụle karịa ihe mgbaru ọsọ 30 n'otu oge maka ìgwè ndị ntorobịa. Ọ naghị achịkwa egwuregwu egwuregwu mbụ na Camp Nou.
Site na nwata, Fàbregas gosipụtara ike siri ike nke uche na nraranye nye egwuregwu ahụ nke mere ka ọ dị iche dịka ezigbo ọkachamara.
Mgbe ọ dị afọ 8, na nrọ nke igwu egwu ọkachamara n'uche ya, Fàbregas amaworị ọzụzụ siri ike ma kpachara anya banyere nri ya, na-ahọrọ azụ na akwụkwọ nri karịa nri ngwa ngwa.
Mgbe ọ dị afọ 10, ọ sonyeere ụlọ akwụkwọ ntorobịa nke FC Barcelona, ​​bụ ebe a ma ama maka ọzụzụ maka ụfọdụ ndị egwuregwu na-eto eto kachasị egwu.
N'oge ọkọchị nke 2003, Fàbregas gosipụtara nnukwu onyinye ya na FIFA U-17 World Championship na Finland.
Onye na-egwu egwuregwu ahụ dugara Spain na njedebe nke abụọ, weghaara Golden Ball dị ka onye kachasị egwu egwuregwu ma nweta onyinye akpụkpọ ụkwụ ọlaedo maka ịghọ onye ọkpụkpọ kachasị asọmpi.
Maka Fàbregas, mkpebi ịhapụ ụlọ na ịwụga n'England bụ nnukwu ihe. Naanị ọnwa ole na ole mgbe FIFA U-17 gasịrị, Fàbregas bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta mbụ ya, ya na Arsenal Arsenal. Ihe ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme.